Global Voices teny Malagasy » Mahalala Tsara kokoa an’i Madagasikara: Ny Valan-javaboarim-pirenena Tendrombohitr’i Ambra · Global Voices teny Malagasy » Print
Mahalala Tsara kokoa an'i Madagasikara: Ny Valan-javaboarim-pirenena Tendrombohitr'i Ambra
Voadika ny 25 Novambra 2016 10:58 GMT 1	 · Mpanoratra Anthony En Decouverte Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Mainty, Madagasikara, Mediam-bahoaka, Saripika, Tontolo_iainana, Tsidika
Madagasikara, valan-javaboary nasionalin'ny tendrombohitr'i ambra. Sary avy amin'ny mpanoratra miaraka amin'ny fanomezana alalana.
Valan-javaboary voalohany naorina teto Madagasikara, anisan'ireo faritra arovana mahaliana indrindra ny mijery azy ny tendrombohitr'i Ambra. Indrindra Indrindra, satria noho izy fonenana lehibe ho an'ireo zavatra tokamiavaka. Fa satria koa mangatsiatsiaka ny rivotra, izay ahitana rivo-piainana mifanohitra tanteraka amin'ny hafanana mampijaly ao amin'io faritra Avaratr'ilay Nosy Lehibe io.
Mijanona ao Madagasikara mba hijery ny valan-javaboary ao amin'ny tendrombohitr'i Ambra
Ny valan-javaboarim-pirenena ao amin'ny tendrombohitr'i Ambra dia 40 kilaometatra miala atsimon'i Diego Suarez, any avaratr'i Madagasikara. Mandrakotra velarantany maherin'ny 23.000 hektara ao amin'ny vondron-javamaniry volkanika misy azy ny ala tropikaliny mandomando. Noho izany, io ala io no loharanon'ny 85%-n'ny orana isan-taona ao amin'ny faritra. Ahitana farihy enina, sy riandrano ary renirano maro ihany koa any.
Mba hitsidihana azy, tsy maintsy maka ny tolotra avy amin'ireo mpitarika matihanina ao amin'ny Madagascar National Park (MNP). Raha manapa-kevitra ny hitsidika ity tahirin-javaboary ity ianao mandritra ny dianao any Madagasikara, amin'ny ankapobeny, afaka misafidy ny fitetezam-paritra tapak'andro ka hatramin'ny telo andro ianao. Mandritra ireo dia ireo, hitety làlana eo anelanelan'ny 850 sy 1.400 metatra miala amin'ny haavon'ny ranomasina ianao.
Fifangaroam-piainana Voajanahary mahavariana ilaina fantarina
Madagascar brookesia micra. Sary avy amin'ny mpanoratra miaraka amin'ny fanomezana alalana.
Amin'ny fidiranao amin'ilay toerana, tokony ho fantatrao fa ilaina ny fanajana ireo «fady» (tsy azo atao). Matokia, fa hanambara izany aminao ny mpitarika anao. Ananan'ilay valan-javaboarin'ny tendrombohitr'i Ambra ireo karazam-biby maro tsy fahita afa-tsy azo aminy ihany, ahitàna karazam-borona 77, karazana gidro 7, ary karazana biby miain-droa 24, fantatra hatramin'izao fotoana izao.
Ny ‘Microcèbe’ na ilay gidro menavolo kely indrindra erantany no tena hita ao. Afaka mitady ny Ibisy misy sanga an'i Madagasikara eny amin'ny sampan-kazo ihany koa ianao. Ezaho tadiavina ihany koa ny Brookesia micra izay tanalahy kely indrindra erantany. Tsy mahatratra 3 sentimetatra akory io biby mandady io rehefa lehibe ! Ary tena sarotra tadiavina izy io, satria miafina any anatin'ireo ravina.
Raha ny mikasika ny tontolon'ny zavamaniry indray, 1.020 no lisitr'ireo karazana ao anatin'ilay vala. Tsy hohadinon'ny mpitarika anao ny mampidera anao ny fanafody azo avy amin'ny zavamaniry maro. Matetika hita any ny voamboana, Famelona na koa ny Ramy. Satria moa ala tropikaly mandomando malagasy ilay resahana, dia ho tafiditra amin'ny ravaka mahazatra ny ampanga, ravinala, vahy manakenda ary ireo voninkazo miavona (orkide).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/25/92595/